योगसूत्र : कसरी निरोगी रहने ? योग र ध्यानको फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
– यम भनेको अठोट हो । यसका लागि व्यक्तिले अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह जस्ता आचरण पालन गर्नुपर्छ ।
– नियम दोस्रो खुड्किलो हो । यसभित्र शुद्धता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधानजस्ता पाँचवटा कुराको पालना गर्नुपर्छ ।
– आसन तेस्रो चरण हो । यम र नियम पालन गरिसकेपछि साधकले आसन साध्नुपर्छ । यसका लागि स्थिर र सुखासनमा बसेर ध्यान गर्नुपर्छ । यस चरणको ध्यानका लागि ओंकार सहायक हुन्छ ।
– प्राणायाम चौथो खुड्किलो हो । प्राणायामभित्र श्वासप्रश्वासलाई साधिन्छ । यसका अनेकौं आयाम छन् ।
– प्रत्याहार विधिमा इन्द्रियलाई इन्द्रियार्थ गराउनु पर्छ । भोगले इन्द्रिय नभोगून् बरु इन्द्रियले भोगलाई भोगून् भन्ने आशय यसमा पाइन्छ । प्रति आहार अर्थात् हाम्रो आहारको गति विपरीत हुन जाओस् भन्ने यसको आशय हुन्छ ।
– प्रत्याहारपछि योगी अन्तर्मुखी हुन थाल्छ । अनि सूक्ष्मबाट अति सूक्ष्मभित्रको शून्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्न थाल्नुपर्छ । जसलाई धारणा भनिन्छ ।
– माथिका सबै प्रक्रिया पार गरिसकेपछि ध्यानमा पुगिन्छ । अन्तर्यामी ब्रह्ममा मन र चित्तलाई एकाग्रचित्त गराउनु नै ध्यान हो । यो क्रिया नभएर अक्रिया हो । यसअघिको प्रत्येक चरण क्रिया हुन् तर ध्यानमा पुगेपछि त्यही क्रिया अब अक्रिया हुन्छ ।
– समाधि गरेर हुने नभई माथिका सबै चरण पार गरेपछि घटित हुने कुरा हो । यो योगको लक्ष्य नै हो भने पनि हुन्छ । समाधि अवस्थामा आनन्दमय, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय एवं शान्तिमय जुन स्वरूपमा पुगिन्छ त्यसपछि पूर्ण तृप्ति वा परमआनन्द प्राप्ति हुन्छ । यो अवस्थामा पुगिसकेपछि मानव जीवनमा केही पनि गर्न बाँकी रहँदैन । यस्तो अवस्थामा पुगेको योगी त्रिगुणातीत अर्थात् सत्व, रज र तम गुणबाट पर पुग्छ । उसका लागि केही पनि प्राप्त गर्न बाँकी रहंदैन । यस अवस्थामा पुगेका योगीहरू
– शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यलाभ
– कार्यक्षमता वृद्धि
– चिन्ताबाट छुटकारा
– रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि
– तन, मन र आत्मा बीचको लयात्मकता
– अनावश्यक विचारबाट मुक्ति
– सकारात्मक सोचको विकास
– ऊर्जाको केन्द्रीकरणबाट आन्तरिक शक्ति सञ्चार
– आत्मज्ञान प्राप्ति
यी खानेकुरा खाली पेट खाँदै हुनुहुन्छ ? निम्तिन सक्छ अल्सर र क्यान्सरसम्मको रोग !!